यौन कंडीशनिंग मस्तिष्क रिसाइप्स गर्दछ इनाम पुरस्कार
सिक्ने लैंगिक कंडीशनिंग
वयस्कता हाम्रो विकास को अवधि हो जब हाम्रो दिमाग व्यभिचार को लागि तैयारी मा स्थित यौन सम्बन्ध को लागि तैयार हो। यो कंडीशनिंग वास्तविक जीवन साथीहरु र / वा इन्टरनेट पोर्नोग्राफी संग अन्तरक्रिया मार्फत जडान हुन सक्छ। यो सिकाइले शाब्दिक बलियो सुपर-छिटो तंत्रिका मार्ग निर्माण गर्नेछ। यसले भविष्यमा यौन र प्रेमको लागि हाम्रो दिमाग र हाम्रो मनोवृत्ति हटाउनेछ। यो सबै आधारित यस विकासको विकासको समयमा के सिक्न मा आधारित छ। यो समय पछि यस चरणमा गहिराइयुक्त गहिरो आदत बन्द गर्न कठिन हुन सक्छ।
इन्टरनेट उपलब्ध नभएसम्म किशोरीहरूले म्याग्दी वा डीभिडीमा पोष्टमा एक निक्कै स्किच गर्नेछन्, अचानक मस्तिष्कद्वारा चाँडो यौन सम्बन्धले घृणा गर्दछ। तिनीहरू "चुपचाप" एक नजर थियो किनभने यो सामग्री केवल वयस्कहरूको लागि थियो। सामान्यतया यो पितर, वृद्ध भाइहरू वा पसलहरू द्वारा पसलबाट लुकेको थियो। उनीहरूले आफ्नो कल्पनालाई अझ सजिलै प्रयोग गर्दछन् कि हस्तक्षेपहरू वा केटीहरूको बारेमा तिनीहरूको कक्षामा यौन तनाव जारी गर्नका लागि सोच्न सक्दछ। जब उनी अन्य युवा पुरुष र महिलाहरु संग अधिक कुराकानी शुरू गरे, उनि अक्सर एक भावनात्मक रूप देखि चुनौतीपूर्ण मार्ग संग एक दूसरे को शरीर को केहि बिंदु मा यौन अंतर्निहित माथि को खोज को लागि उद्यम हुनेछ।
आज अधिकांश भन्दा युवाहरू 'उनीहरूको यौन अन्वेषण' कठोर कोर अश्लीलसँग उनीहरूका कल्पनाहरूको इन्धन गर्न। तिनीहरू आउन नसक्ने अचम्म-चरा महिलाहरूको नरम-कोर छविहरूसँग सुरु हुँदैनन्। अश्लील सामग्रीको 80% भन्दा बढी महिलाहरू विरुद्ध विषैले हिंसात्मक हिंसा समावेश गर्दछ। दर्दनाक, चौंकाने वाला सामग्री पनि विशेष गरी किशोरों को मस्तिष्क को लागि यौन उत्साहजनक छ किनकी यसको बच्चा या वयस्क मस्तिष्क भन्दा यस्तो उत्तेजना को लागि एक उच्च थ्रेसहोल्ड छ। व्यक्तिहरूले धेरै चरम सामग्री हेर्न सक्छन् आफ्नो स्मार्टफोन्समा एक सिजनमा आफ्ना आमाबाबुले जीवनभर देख्न सक्दछन् भन्दा। यस स्ट्रिमिङ कडा-कोर पोर्नोग्राफीको असरले मस्तिष्क र यसको प्रकार्यलाई पुनरुत्थान गर्दछ।
ब्रेन्स पोर्नको लागि अनुकूल छैन
ब्रिजब्याण्ड इन्टरनेटको आगमनको कारण गत दशकमा उपलब्ध हुने सम्भावनात्मक सामग्रीको यो सुनामीसँग सम्झौता गर्न हाम्रो दिमागले अनुकूलन गरेको छैन। जवान मान्छे र हेल्थकेयर प्रोफेसरहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएका मुख्य स्वास्थ्य प्रभावहरू: अवसाद; सामाजिक चिंता; सामाजिक अलगाव; मस्तिष्क कोहरे; नकारात्मक नतिजाहरु र खतरनाक विकारहरु को बावजूद इंटरनेट पोर्नोग्राफी को मजबूर नजर राखन।
जब यो अति उत्तेजित इनाममा असीमित पहुँच छ जब मस्तिष्क के हो यो कहिल्यै संभाल गर्न विकसित छैन? केहि दिमागहरू अनुकूलन - र राम्रो तरिकामा छैन। प्रक्रिया क्रमिक हो। पहिला, संक्रामक पोर्न र हस्तमैथुन प्रयोग गरेर संतोषजनक रूपमा यौन तनाव र दर्ताको समाधान गर्दछ।
तर यदि हामीले आफैंलाई घृणा गरिरहनु भएको छ भने, हाम्रो दिमागले हाम्रो विरुद्ध काम सुरु गर्न सक्छ। यसले यसको प्रतिक्रियालाई कम गरेर अत्यधिक डपामिनको विरुद्धमा सुरक्षित गर्दछ, र हामी कम र कम कृतज्ञता महसुस गर्छौं। यो डोपामाइनको लागि संवेदनशीलता घटाउन केही प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तेजनाको लागि अझ बढी निर्धारित खोजीमा धक्का दिन्छ, जुन, बारीमा, स्थायी परिवर्तनहरू चलाउँछ, मस्तिष्कको वास्तविक भौतिक परिवर्तन। तिनीहरू रिवर्स गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन्।
यो किन गर्नुपर्छ? विगतको अश्लीलबाट के फरक छ?
<< मेमोरी र सिकाउने पोर्न र प्रारम्भिक यौन ऋण >>